सानी लियोनीको करिअरका ५ ठूला विवादहरु यस्ता थिए - हातेमालो डेली
सानी लियोनीको करिअरका ५ ठूला विवादहरु यस्ता थिए
सानी लियोनी बलिउड कि एक सुपरिचित नाम हो जसलाई नचिन्ने प्राए कम नै होला। बलिउडकी बेबी डल अर्थात सनी लियोनीको करिअरमा एक समय यस्तो पनि थियो जब उनी भारतबाट गुगलमा सबैभन्दा धेरै खोजिएकी सेलिब्रेटी बनेकी थिइन् सनीले बलिउडका कैयौं फिल्ममा काम गरेकी छिन् । तर लिड अभिनेत्रीको रुपमा काम गर्दा सफल हासिल भने गर्न सकिनन। पोर्नस्टारबाट सिल्भरस्क्रिन अभिनेत्री बनेकी सनी आइटम नम्बरमा भने सधैं सफल रहिन् । उनको करिअरका ५ ठूला विवादहरु यस्ता थिए
१. सनी बलिउड प्रवेश गर्नुभन्दा पहिल्यै चर्चित थियन्
३. पोर्न फिल्ममा काम मात्र लगानीकर्ता नै बनेकी थिइन्
४. आफू सिंगर हुँदा आफू पनि वन नाइट स्ट्याण्डमा बसिसकेको बताएकी थिइन् ।
५. कण्डमको विज्ञापन गर्दा देशमा बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुन्छ ।
Previous articleउपत्यकाका सबै नाका सिल हुने, प्रवेश विन्दुमै रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
Next articleकुहिएको चामल आपूर्ति गर्नेलाई हुनेभो कारवाही